NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် MOG Technologies က NABSHOW 2019 မှာဖိုင်-based Workflows တိုးတက်လာမီးမောင်းထိုးပြ
Home » သတင်း » MOG Technologies က NABSHOW 2019 မှာဖိုင်-based Workflows တိုးတက်လာမီးမောင်းထိုးပြ
MOG Technologies က NABSHOW 2019 မှာဖိုင်-based Workflows တိုးတက်လာမီးမောင်းထိုးပြ
[ပေါ်တူဂီ, 28-03-2019] - MOG Technologies က, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်း, Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌, 2019 ဧပြီလတဲ SU8 ဖို့ရာအရပျ 11 ယူပြီး, NAB 7510 မှာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအာရုံသစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ module တွေတည်းဖြတ်အစုံစွမ်းဆောင်မှုနှင့်စက်အပြုအမူနှင့်ဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးဘို့သစ်ကို OTT ပလက်ဖောင်းကိုခြေရာခံရန်, ဖိုင်-based Workflows အဘို့ကိုယူနောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်လာလိမ့်မည်။
အဆိုပါထူးခြားသော mxfSPEEDRAIL အလယ်ပိုင်းစားသုံးမိသည့်စနစ်မြင့်မားတဲ့အသွားအလာစွမ်းဆောင်ရည်, ပလက်ဖောင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ metadata ကိုခွဲဝေမှုအကြားကြီးမြတ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါကမ်းလှမ်း, လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်လွှင့်သည့်နည်းပညာနှင့်ပုံစံများနှင့်အတူပေါင်းစပ်။
အဆိုပါ mxfSPEEDRAIL ယခုထောက်ပံ့နေသည် 8K Workflows, HDR နှင့် 240fps မှတက် HFR input ကိုနှင့် output ကို, သစ်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံသတင်းရင်းမြစ် ထိုကဲ့သို့သော ARRIRAW, Blackmagic RAW, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံပက်ကေ့အဖြစ် Ikegami GFPAK နှင့်အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ။ အဆိုပါစနစ်အားကိုင်တွယ်ရန်အပြည့်အဝနိုင် စာတန်းထိုး ကို formats, အမည်ရ CEA-708, EIA ကို-608, Scenarist (SCC) နှင့် SubRip (SRT) ။ အဆိုပါ ADDED မီးရှို့ရာအတွက်ဂရပ်ဖစ် ပိုမိုမြန်ဆန်ပေးပို့မှုအတွက်မဆိုရေစာ, စာသား, ပုံရိပ်, ဗီဒီယို, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီလိုဂို၏သွင်းခွင့်ပြုသဖြင့်, ကွင်းဆက်မှတ်တမ်းတင်စွမ်းရည် mediaREC မော်ဒယ်ပေါ် feed ကိုထပ်ခါတလဲလဲနှင့်သိုလှောင်မှုအာကာသပေါ်ချွေတာယခင်ကမှတ်တမ်းတင်ထားသောပစ္စည်းကိုဖျက်ခြင်း, ထို့နောက်ချက်ချင်းလက်လှမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်မီဒီယာစောင့်ရှောက်ခြင်း, အအသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောကာလကမပြတ်မတောက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
အသစ်က streaming များလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအစဉ်အလာကို formats ပေါင်းစပ်, mxfSPEEDRAIL လည်းအများအပြားထောက်ပံ့နေသည် တစ်ဦး input ကိုနှင့် output ကိုအရင်းအမြစ်အဖြစ်လူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များနှင့် VoD ဘို့နှစ်ခုလုံး။ မိုဃ်းတိမ်မှသမာဓိ (ထိုကဲ့သို့သော Google Cloud သိုလှောင်မှု, အမေဇုံ S3 နှင့် Glacier, Tencent တိမ်တိုက်, နှင့် Microsoft Azure အဖြစ်) နှင့်လုပ်ငန်းသိုလှောင်မှု (ထိုကဲ့သို့သော Google Drive ကို, iCloud, Adobe က CS Dropbox, WeTransfer နှင့် Microsoft OneDrive ကဲ့သို့) စားသုံးသူသိုလှောင်မှုနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည်။ mxfSPEEDRAIL mediaREC မော်ဒယ်ကိုလည်းနှင့်အတူလုံးဝအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဖြစ်ပါသည် NewTek NDI®။
ထိန်းချုပ်မှု, စီမံခန့်ခွဲမှု, လူအပေါင်းတို့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များတိုင်းတာခြင်းများအတွက်ဆန်းသစ် analytics ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုအသစ်က module တွေနှင့်အတူ updated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာ: mediaANALYTICS မီဒီယာပညာရှင်များ '' ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူတို့တန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအဘို့မိမိတို့အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်များတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်သင့်တယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်များအတွက်အကောင်းဆုံး KPIs ပေးပါသည်။ ဒါဟာအများအပြားမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်, နှင့်ပြဿနာများနှင့်အိပ်ကြ၏ရှိရာခြေရာခံခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုမအောင်မြင်မှုများကိုအုပ်စိုးအထူးပြုအမြင်နှင့်တကွ, ဖိုင်တွေနဲ့ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးခွငျးဖွငျ့ဤပါဘူး။
editorsPerformance မီဒီယာပညာရှင်များ '' အလုပ်သို့ကျူးကျော်ခြင်းမရှိဘဲ, တည်းဖြတ်အစုံနှင့်အယ်ဒီတာများနှင့် ပတ်သက်. KPIs ရဖို့ပါဝါပေးသည်။ ဤအချက်အလက်ထို့နောက်စက်နှင့်လူ့အရင်းအမြစ်များပိုကောင်းအသုံးပြုမှုကိုအောင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုလုပ်ငန်းအသွားအလာပိုမိုကောင်းမွန်ရေးဆွေးနွေးအဆိုပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်စီးနှင့် VoD များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ VIZZI အဖွဲ့အစည်းများအတွေ့အကြုံများပါဝငျနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပရိသတ်ကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်ကိုသေချာ; အစဉ်အလာများနှင့်ဆက်စပ်ကြော်ငြာရွေးချယ်စရာကနေရှေးခယျြမဆိုငွေရှာခြင်းအတွက်အစီအစဉ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်သတ်မှတ်; နှင့်အစွမ်းထက်နှင့်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်ရလဒ်များကိုတိုင်းတာ။ တစ်ဦးလစာ-အဖြစ်-you-ကြီးထွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံနှင့်အတူ, VIZZI သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုရှိနေခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်သာသင်အသုံးပြုအရာကိုပေးဆောင်ကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။
MOG ကတီထွင် MXF Libraries ၏ဆုရ set ကိုယခု muxing နှင့် IMF မီဒီယာဖိုင်များကိုဖယ်ရှား-muxing များအတွက် tools တွေကိုအစုတခုပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ ကြောင့်ဖိုင်နှင့် metadata ဖန်ဆင်းခြင်းများအတွက် IMF ကတင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများဖို့ IMF ကထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ခြင်း :: SDK ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လျော့ပါးနှင့်အချက်အလက်ရရှိမှုနှင့်ကိုင်တွယ်အပေါ်အသေးစိတ်ထိန်းချုပ်ပေးစုံလင်သည်။
MOG IMF က :: SDK ကို IMF ကလိုက်နာမီဒီယာဖိုင်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုပုံ developer များ IMF က applications များနှင့် Workflows ကနေအကောင်းဆုံးရသေချာပါလိမ့်မယ်။
ဤအရာအလုံးစုံကိုအဓိကထုတ်အပြင်ဧည့်သည်များမှာလည်း AR စတူဒီယိုနှင့် 360 ဘဏ်ဍာများအတွက်အများဆုံးအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုတွေ့လိမ့်မည်။
MOG ဧည့်သည်အသစ်ကထုတ်ကုန်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိကြပြီးအဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ NABSHOW 2019, တဲ SU7510 မှာပြပါလိမ့်မည်။
MOG Technologies က တစ်နေ့တဦးတည်းကတည်းကဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုရှူရှိုက်။ မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကတောက်ပသောအဖွဲ့သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီမီဒီယာစာကြည့်တိုက်များ, အနုပညာထုတ်လွှင့်စနစ်များပြည်နယ်နှင့်မဆိုအရွယ်အစားအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ခိုင်ခံ့သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖွတဲ့ cloud-based အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် Multi-content တွေကိုပလက်ဖောင်းတီထွင်ခဲ့သည်။ ယခုသစ္စာဝါဒီကို virtual အတွေ့အကြုံများသို့အကြောင်းအရာအားလုံးကြင်နာချိတ်ဆက်နှင့်အသွင်ပြောင်း, ပြဇာတ်ဝေမျှနိုင်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။
MOG နည်းပညာပိုမိုနက်ရှိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုမိုအသိပညာ, နစ်မြှုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အပြုအမူကသူတို့ကိုဦးဆောင်အသိုင်းအဝိုင်းချိတ်ဆက်ဖို့အဆုံးစွန်နည်းပညာပေးထားပါတယ်။
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် MOG Technologies က, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.mog-technologies.com
MOG Technologies က
MOG Technologies ကအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
MOG IBC 2019 မှာသစ်ကို VIZZI ရဲ့ features တွေကိုတင်ဆက် - စက်တင်ဘာလ 9, 2019
MOG IBC 2019 မှာထုတ်ကုန်အသစ်မိတ်ဆက် - စက်တင်ဘာလ 4, 2019
IBC4မှာ MOG မိတ်ဆက် MAM2019PRO - သြဂုတ်လ 29, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော nabshow OTT SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality	2019-03-28
ယခင်: Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ 2018 များအတွက်ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်များကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Dalet NAB 2019 မှာဂိမ်း-ပြောင်းခြင်းအဝေးမှတည်းဖြတ်မူဘောင်မိတ်ဆက်